CADEYN: Wasiirkii Deegaanka & Isbedelka Cimilada Puntland oo is casilay, kuna dhawaaqay ujeedada Iscasiladiisa – Puntlandtimes
CADEYN: Wasiirkii Deegaanka & Isbedelka Cimilada Puntland oo is casilay, kuna dhawaaqay ujeedada Iscasiladiisa
GAROOWE(P-TIMES)- Wasiirkii Deegaanka & Isbedelka Cimilada Puntland Dr Cali Cabdullaahi Warsame ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay Is casiladiisa, waxayna Puntlandtimes heshay nuqulo cadeynaya warqadda Is casilaaddan oo loo diray Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Wasiirka Deegaanka ayaa si rasmi ah u cadeeyey in ay fashilmeen sadex mashruuc oo dhamantood muhiimad u lahaa Shacabka Puntland, oo ay ku jiraan Labo mashruuc oo ay dawladda Jarmalku ka hirgalinaysay Puntland.
Sidaas oo kale wasiirka ayaa ku eedeeyey Madaxda Puntland in ay danaha horumarineed ee dalka ka hormarinayaan dano shaqsiyaad gaar ah oo ay ka leeyihiin ujeedooyin guracan.
Warsiduhu wuxuu helay warqadda is casilaad oo qeyb ka mid ah lagu qeexay erayo adag oo ku wajahan Madaxda Puntland, gaar ahaana waxaa uu cadeeyey wasiirka Deegaanka & Isbedelka Cimiladu in lagu fashilmay dhamaan ujeedooyinki hogaamineed ee Xukuumadda Madaxweyne Gaas, dalkuna uu dhexda u taagan yahay jahawareer siyaasaded, Amni, Dhaqaale darro iyo xaalad aan sahlaneyn.
Munaafiqnimo taaso kale ayaa layiraahdaa. Ma markii xukumada uu ka tirsanaa wakhigeedii maalmo ka hareen ayuu iscasilayaa. Hadii uu daacad yahay maxuu awal hore oo dhan khaladka jira u muujin waayey oo iskugu dayi waayey in uu wax ka qabto . Hadii uu wax ka qaban waayeyna fagaaraha usoo dhigi waayey oo shicibka puntland xogta ula qaybsan waayey. Ama isu casili waayey.
Ma markii xeero iyo fandhaal kala dhaceen ayuu rabaa in uu malaaig ama muumin iska dhigo. Mise ma waxuu is leeyahay tanu tagtee tankale la jaan qaad oo shanta sano ee soosocota sidii horoo kale sabeeno qaloo subag ku subko. Fashilkii dhacay isba masuul buu ka yahay, xalay dhaley’na kama noqon karo.
Canjeeladii la kariye yaa cunay….usaga…waa ceeboobayee… waa ceeboobayee
C/wali gaas wadankii amni daro iyo caasimadii oo loo jiro 30km buu kujira sidii uu u soo noqon lahaa, mashaariic dii horey u taalay buu qiil kadhigan wax cusubna kuma soo kordhin waxaa sugnaa waa in waaaaradaha kale is casilaan baravo mudane wasiir